Isevisi yangemuva kokuthengisa - i-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Imigomo newaranti ye-Mankeel after-sales
Lesi sigaba somthetho sisebenza kuphela kubasabalalisi abagunyazwe ngokusemthethweni i-Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd. kanye nemikhiqizo ye-Mankeel ethengiswa ezinkundleni zokuthengisa ze-inthanethi zezinkampani zangaphandle eziqhutshwa yi-Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd. I-Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd izohlinzeka abasebenzisi abathenge imikhiqizo ye-Mankeel ngewaranti yonyaka owodwa. Uma umkhiqizo wehluleka ngaphansi kokusetshenziswa okujwayelekile ngokwebhukwana lomsebenzisi, abathengi bangawubuyisela enkampanini yethu nekhadi lewaranti, sizokunikeza isevisi yangemuva kokuthengisa phakathi nesikhathi sewaranti.
Kubasebenzisi abathenge imikhiqizo ye-Mankeel electric scooter, sizokunikeza isevisi yewaranti yonyaka owodwa yamahhala. Ngesikhathi sewaranti, umkhiqizo awukwazi ukusetshenziswa ngokujwayelekile ngenxa yezinkinga zekhwalithi yomkhiqizo. Phakathi nezinsuku ezingu-7 kusukela ekuthengweni komkhiqizo, ungafaka isicelo enkampanini yethu ukuze ubuyiselwe futhi ushintshwe ngama-invoyisi namanye amadokhumenti avumelekile. Ngemva kokuphelelwa yisikhathi kwewaranti, inkampani izokhokhisa izimali ezihlobene ngemikhiqizo edinga ukunakekelwa nokubuyekezwa.
Kunoma yiziphi izimo ezilandelayo, ayimboziwe iwaranti yamahhala futhi izolungiswa ngenkokhelo.
1. Ukwehluleka okudalwe ukwehluleka komsebenzisi ukusebenzisa, ukunakekela kanye nokulungisa ngokuvumelana “Nebhukwana Lokufundisa”.
2. Umonakalo odalwe ukuzilungisa, ukuqaqa, nokukhanda komsebenzisi, kanye nokwehluleka okudalwe ukungahambisani nemithetho yokusebenzisa.
3. Ukwehluleka okudalwe ukugcinwa okungafanele ngumsebenzisi noma ngengozi
4. I-invoyisi evumelekile, ikhadi lesiqinisekiso, inombolo yefekthri ayihambisani nemodeli noma ishintshiwe
5. Umonakalo odalwe ukugibela emvuleni isikhathi eside nokucwiliswa emanzini (lesi sigatshana semikhiqizo ye-Mankeel electric scooter kuphela)
1. Imigomo yesiqinisekiso isebenza kuphela emikhiqizweni ethengiswa i-Shenzhen Mankeel Technology Co., Ltd. Ngemikhiqizo ethengwe kubathengisi abangagunyaziwe noma ezinye iziteshi, inkampani ayinawo umthwalo wewaranti.
I-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd. igodle ilungelo lokugcina lokuhumusha lezindaba ezingenhla.